DEG DEG: Macalimiin Kenyan ah oo Qarax lagula eegtay Gaaalkacyo.. - iftineducation.com
DEG DEG: Macalimiin Kenyan ah oo Qarax lagula eegtay Gaaalkacyo..
aadan21 / January 2, 2015
iftineducation.com – Qarax la sheegay inuu dhaliyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isagu jirta ayaa goor dhawayd ka dhacay Dugsiga Yameyska ee magaalada Gaalkacyo.
Waxaa la sheegay in qaraxan lala eegtay bas ay la socdeen macaliimin Kenyan ah oo barayaal ka ah dugsiga Yameyska oo ku yaalla magaalada Gaalkacyo.
Wali wax faah faahin ah kama soo bixin qaraxa balse waxaa la sheegay inuu ku dhintay mid ka mid ah ilaalada dugsi,halka sidoo kale ay ku dhawaacmeen afar macalin oo dugsiga barayaal ka ahaa,
“Walal waxaan ku sheegi kara qof wardiye ah ayaa dhintay,ilaa afar macalin oo dhaawac ah midna uu khatar ahaa ayaan annigu arkay,”sida waxaa sheegay Cali Axmed oo yiri waxaan ku dhawa dugsiga uu qaraxa ka dhacay.
Ciidammo ka tirsan kuwa amniga ayaa gaaray irida hore ee dugsiga Yamayska oo ah halka uu qaraxa ka dhacay,waxaana la sheegay macalimiintii ku dhaawacantay in loo qaaday isbitaalka magaalada Gaalkacyo halkaa oo lugu dabiibayo.
Qof goob-jooga ah ayaa u sheegay warbaahinta inuu qaraxa xooggana, khasaaruhuna uu inta ka badan karo.
Flim soomaalida wada sugayeen Oo soo baxay -Daawo
Kutubta Saxiixul Bukhaari iyo Xisnul Muslim oo laga mamnuucay Dalka…